ခုတင်ထက်မှာ စကေးကြမ်းတဲ့ ချိဖဖြစ်ဖို့ | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး ခုတင်ထက်မှာ စကေးကြမ်းတဲ့ ချိဖဖြစ်ဖို့
အရွယ်ရောက်ပြီးသား ချိဖအများစုအတွက်တော့ ခုတင်ထက်မှာ ချစ်ရသူနဲ့ နှစ်ကိုယ်တူ ဂျိန်းကြတဲ့အခါ ကြည့်ဖူးနေကြ အပြာကားထဲကလို နာရီနဲ့ချီပြီး စိတ်ရှိသလောက် ကြာကြာကြမ်းနိုင်ဖို့ စိတ်ကူးထားမိတတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခက်တာက အပြာကားတွေမှာပါတဲ့ ရိုက်ကွက်တွေက လန်ကြုတ်ဇာတ်လမ်းတွေကို ဖြတ်ညှပ်ကပ် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဒီလိုအပြာကားတွေကို အားကျပြီး လိုက်တုမိရင်တော့ အနှေးနဲ့အမြန် ဒီပရက်ရှင်ဝင်နေတဲ့ ချိဖတစ်ယောက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မစိုးရိမ်ပါနဲ့!! အပြာကားထဲကလိုမျိုး စူပါပါဝါအပြည့်ရှိတဲ့ လန်ကြုတ်ဘီးကျဲကြီးမဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လဲ ကိုယ့်အရပ်နဲ့ကိုယ်ဇာတ်မှာ အပီအပြင်စကေးကြမ်းပြီး ဂေါ်တဲ့ ချိဖဖြစ်ဖို့ကိုတော့ သိလိုရာမေးကနေ တာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
ကဲ ခုတင်ထက်မှာ ကြာကြာလေး ကြမ်းနိုင်တဲ့ ချိဖဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့
(၁) မဂျိန်းခင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် လက်စွမ်းပြထားပါ…
ဒါကတော့ ချစ်ရည်မလူးခင်မှာ ချိဖတို့အနေနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာကို လုပ်ထားတာက ခုတင်ပေါ်ကစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကို အထောက်အကူပြုပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသား ယောကျာ်းတွေအတွက် လက်အားကိုးပြီးတာနဲ့ ပြန်လည်ထောင်မတ်နိုင်စွမ်းက မိနစ်အနည်းငယ် ဒါမှမဟုတ် နာရီပိုင်းလောက်ပဲ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အတူမချစ်ခင် အချိန်လေးရရင် ကိုယ့်မြွေဆိုးလေးကို ကိုယ်ကိုတိုင် လက်စွမ်းပြထားနိုင်ပါတယ်။
(၂) မချစ်ခင် ဆွဖို့လိုတယ်…
တူနှစ်ကိုယ်ချစ်ကြတဲ့အခါမှာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ဂိုးသွင်းဖို့ ဆိုပေမယ့်လဲ ဒါကိုပဲ စဉ်းစားပြီး စိတ်စောနေမယ်ဆိုရင် ချိဖတို့အနေနဲ့ အချိန်ကြာကြာ ဂျိန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာက အိပ်မက်လိုမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မချစ်ခင် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကနဦးနှိုးဆွမှုလေးတွေကို စိတ်ပါပါနဲ့ အချိန်ပေးပြီး လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် နှစ်ဦးစလုံးအတွက် လိင်မှုဆန္ဒပြည့်ဝပြီး ချိဖတို့ကို ကြာကြာစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်လို့ စစ်တမ်းတွေက ဆိုထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဂိုးသွင်းမကြမ်းခင် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အနုအရွစကေးကိုလဲ ပြဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့!
အလန်းစား ဆွဲဆောင်နည်းတွေကို ဒီ Link မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
(၃) ရပ်လိုက် သွားလိုက် နည်းကို ကျင့်သုံးပါ…
ရပ်လိုက် သွားလိုက် နည်းလမ်းဆိုတာက‌ ထိုးသွင်းဆက်ဆံမှုလုပ်ပြီး သုတ်လွှတ်တော့မယ့်အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်ပြီး အသက်ပြင်းပြင်းရှုပါ။ လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်ထားတဲ့အနေအထားမှာပဲ သင့်ချစ်သူလေးကို အနမ်းပြင်းရှရှလေးတွေ ပေးနေလို့လဲ ရပါတယ်။ သဘောကတော့ သုတ်လွှတ်တော့မယ့်အချိန်မှာ လှည့်စားမှုလုပ်ပြီး ကြာကြာထိန်းထားနိုင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အာရုံလွှဲလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ချစ်တဲ့အခါတိုင်း ဒီနည်းလမ်းကို စမ်းသပ်ကြည့်ပြီး စကေးကြမ်းတဲ့ချိဖဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပါသေးတယ်။
(၄) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစား လုပ်ပါ…
ယောကျာ်းလေးတွေ သုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းကို အချိန်ကြာကြာထိန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင် သက်လုံအားကောင်းဖို့ကလဲ တစ်ဖက်တလမ်းက လိုအပ်ပါတယ်။ အားကစားထဲမှာဆိုရင် အမျိုးသားတွေ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ ဝိတ်မတာတွေ၊ ရေကူး၊ ဘားခိုတွေကိုလဲ လုပ်လို့ရပြီး ကီဂယ်လေ့ကျင့်ခန်းလိုမျိုး တင်ပါးဆုံကြွက်သားအားကောင်းစေတာမျိုး လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် သက်လုံအားကောင်းလာမှာပါ။
ကဲ သိလိုရာမေးကနေ ချိဖတို့အတွက် ဖဲမွေ့ယာထက်မှာ အချိန်အကြာကြီး “ငါကွ” လို့ ဟစ်နိုင်မယ့် ချိဖတွေဖြစ်ဖို့ သိထားရမှာတွေကို ပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ…